Ntuziaka ikuku ikuku ọhụrụ Iwata: ụzọ 4 iji gbue
“Uzo abuo iji gbasa” - nke a bu aha echiche ahia ohuru site n’aka ndi Japan nke na emeputa ikuku Iwata. Companylọ ọrụ ahụ na-ewere usoro siri ike, mana enyemaka kachasị maka ndị mbido, na ntinye ikuku a na-abụ otu ị nwere ike iwepụta dị ka enyi na-eji ọrụ. Ebumnuche dị ebe a bụ inye ndị nwere mmasị ikuku ahịhịa dị mma ileba anya na njirimara na uru ọ bụla otu nke ihe karịrị 30 airbrush model, si otu a na-eme ka nhọrọ maka mkpa ya na nke ya. Nwere ike ịmara usoro ndị ọzọ yiri ya na egwuregwu ụwa, ebe ntụpọ tennis ga-adị iche n'ọkwa dabere na ọsọ ya ma ọ bụ ihe ziri ezi.
Iwata gbara egbe. Dabere na ụdị geometric dị iche iche nke ụdị agba dị iche iche, a na-ejikarị usoro ndị a iji rụọ ọrụ egbe Iwata na Japan.
1. Usoro ịgba ntụgharị. Usoro ịgba ahụ kwụ ọtọ. Jiri aka nri were jide egbe ịgba. Bido n'akụkụ aka ekpe nke onye na-arụ ọrụ, gaa spanner n'aka ekpe gaa n'aka nri. Mee njem a ngwa ngwa gbadaa na aka ekpe. Na mkpokọta, elu njikọta bụ 1/2, 1/3 na 1/4, nke a nwere ike ịchịkọta dịka ụdị mkpuchi ahụ. Mgbe emechara otu mpaghara, fesa ọzọ n’elu na usoro. Dabere na omenala, spraying nwekwara ike a si na-abụghị uzo, ntụgharị si ala n'aka nri nke ọrụ na n'akụkụ elu.
2. Ogologo oge ịgba mmiri. Uzo a di otu a esi atughari udiri ahiri, ewezuga na usoro nke Japanese Iwata spray gun nozzle ka a gbanwere uzo uzo, ura ahu na-esikwa n’aka ekpe, elu ma obu aka nri ala na azu. I nwekwara ike isi n’ala ala aka nri ma ọ bụ ala ekpe.
3. crosszọ usoro kwụ ọtọ na kwụ ọtọ. Mgbe ị na-agbanye mmiri, fesaa azụ na azụ ogologo. Mgbe fesaa ya nke ugboro abụọ, fesaa azụ na azụ. Gbanwee uzo nke eserese oge obula.